Yini isoftware eyinhloko yokuphathwa kokudlela? | Izindaba zegajethi
Yini isoftware eyinhloko yokuphathwa kokudlela?
Uma kukhulunywa ngokuphatha ibhizinisi, uma singafuni ukulahleka ezinqwabeni zamaphepha, izichasiselo nokunye, okungcono kakhulu esingakwenzasebenzisa isoftware egxile ebhizinisini, isoftware ezosisiza hhayi kuphela usuku nosuku, kepha futhi uma kukhulunywa ngokwazi inzuzo yebhizinisi, ukulungiswa kwentela, ukwazi ngaso sonke isikhathi amasheya, imali engenayo, izinkokhelo ...
Uma, ngaphezu kwalokho, kuyibhizinisi elinenani elikhulu lemikhiqizo, njengendawo yokudlela, izinto ziyinkimbinkimbi kakhulu, ngoba bobabili abasebenzi nathi kufanele sazi intengo yensizakalo ngayinye esiyinikezayo. Isixazululo sale nkinga ukusebenzisa indlela ye- isoftware yokuphathwa kwezindawo zokudlela.
Lezi zinhlelo zisivumela ukuthi sakhe uhlu lwayo yonke imikhiqizo kanye / noma nezinsizakalo esizinikezayo kanye nentengo yazo, ukuze umuntu ophethe ukushaja, akwazi ukuhamba kalula kuhlelo lokusebenza beshaya zonke izinsizakalo zamakhasimende njengoba ubakhonza noma ngqo lapho kufakwa ama-oda, uma uhlelo lokusebenza luhambisana namadivayisi weselula noma amaphilisi.
Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile sokwenza ibhizinisi lakho lokudla ngedijithali, kungaba yindawo yokuphuzela utshwala, indawo yokudlela, indawo yokudlela, indawo yokudlela ... bese sikukhombisa izinhlelo zokusebenza ezinhle zokuphatha izindawo zokudlela.
2 Ibha ye-Doscar
3 Glop POS izihambi
4 Ukuphumula Kwangaphambili kwe-ICG
6 Uweta 10
7 I-Numier POS
Okuhle kakhulu isoftware yokuphathwa kwezindawo zokudlela Siyitholile ku-OfiBarman. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza singakwazi phatha zonke izidingo zemigoqo, ama-ice cream parlors, ama-pizza, izindawo zokudlela, amakilabhu, izindawo zokudlela, amathilomu... kusuka ekulawulweni kwesitoko kuya ekuthengisweni, izinkokhelo kubaphakeli, umsebenzi wetafula, ukuthengiswa kwamaweta ...
Ngaphezu kwalokho, ngohlelo lwe-OfiComanda, oweta bangenza i- oda ngqo kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi ukuthumela ama-oda ekhishini ngokusebenzisa iphrinta kanye nesicelo se-OfiBarman sokuphathwa kokuqoqwa okulandelayo.
U-OfiBarman unakho ngaphezu kokufakwa okungu-2.550 kokubili eSpain naseMexico, ePeru, ePanama, eDominican Republic futhi phakathi kwawo kukhona ama-franchise wezindawo zokudlela nezindawo zokudlela, amahhotela, ama-nightclub ... Kulabo abangahleleli ukusebenzisa imali eningi ekuqaleni, le software ingatholakala ku izindlela ezimbili ezihlukene: ukuthenga noma ukukhokha ukusetshenziswa ngakunye.
Enye inketho ethokozisayo yokuphatha ibhizinisi lokudlela itholakala kuhlelo lokusebenza lwe-Doscar Bar. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, oluvelela kakhulu kulula ukufunda, singakwazi ukuphatha noma yiliphi ibhizinisi lokungenisa izihambi.
Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulawule amashifu oweta, ukhawulele ukuvulwa kwebhokisi kubasebenzi abathile, wakhe futhi uguqule isitoko sokugcina impahla, ukhiqize amalebula wokuphrinta anama-barcode, ukhiqize izilinganiso, ama-invoyisi we-proforma ... ngaphezu thekelisa imibiko ngefomethi ye-.pdf, .xlsx ne-.docx.
Njengohlelo lokusebenza oluhle olufanele usawoti walo, lusivumela ukuthi sakhe i- imephu yamatafula ebhizinisi lapho ungahlanganisa khona i-oda ngalinye, uthumele ama-oda kuphrinta njengoba enziwa, afaka uhlelo lokubhuka, phrinta inani elikhulu lemibiko yazo zonke izinhlobo ...
Glop POS izihambi
Ukungenisa izihambi kweGlop POS kuyipulatifomu yokuphatha amabhizinisi ezivakashi asivumelayo sebenzisana nezinkundla zokuletha ukudla ezifana neGlovo, Just Eat, Deliveroo phakathi kwabanye, ngoba kusivumela ukuthi sihlanganise ama-oda avela kuwebhusayithi yethu nalezi zingxenyekazi.
Ngalesi sicelo, singazi ngaso sonke isikhathi isimo sokulungiselela izitsha nesikhathi esisele aze aphume ekhishini. Lokhu kungenzeka ngenxa yomqaphi wasekhishini, isicelo esingasifaka kuthebhulethi noma i-smartphone lapho abapheki bemaka khona izitsha njengoba zilungiswa, ngaleyo ndlela sixwayisa uweta ukuthi azilethe kumakhasimende.
Ngokufaka isicelo samadivayisi weselula namathebulethi, oweta bangenza noma iyiphi i-oda ekhishini, kufaka phakathi izithako ezingeziwe noma ukukhipha imikhiqizo ezitsheni ngaphezu kwe engeza imibono eyengeziwe ekhishini ukuze balungise isitsha ngandlela thile.
Ukuphumula Kwangaphambili kwe-ICG
ICQ Front Rest yenzelwe phatha noma yiliphi ibhizinisi lokungenisa izihambiUkusuka ezikhungweni ezincane kuya kuma-franchise amakhulu, ane-interface esetshenziswa kalula, ivumela oweta ukuthi babeke ama-oda avela ku-smartphone bese bewathumela ekhishini ukuze balungiselele.
Kuyasivumela futhi phatha ukuhlala etafuleni, dala amafayela womkhiqizo, uphathe isitoko, wenze ukubhuka futhi, futhi kuyahambisana nama-oda ngewebhusayithi yebhizinisi.
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza, singakwazi setha izexwayiso zezimo ezithile njengokushoda kwesitoko, abasebenzi abangafiki emsebenzini wabo, lapho kwenziwa ukuvalwa kwemali… Lolu hlelo lokusebenza lwenzelwe ama-franchise ikakhulukazi ngoba livumela zonke izikhungo ukuthi zilawulwe kude endaweni eyodwa.
I-Loyverse uhlelo lokusebenza oluvumela shintsha i-smartphone noma ithebhulethi yethu ibe yi-POS, noma ngabe iyisikhungo esincane noma izitolo eziningi ngefomethi ye-franchise nokuthi iyatholakala emazweni angaphezu kwe-170.
Uhlelo lokusebenza ivumela ukuthi sazi ngaso sonke isikhathi isimo sokusungulwa kwempahla, okusithumela izexwayiso lapho kuwela ngaphansi kobuncane besisekelo esisibekile, okusivumela ukuthi sithumele ama-oda ngokuzenzekelayo kumphakeli. Kusivumela nokuthi sihlaziye imali engenayo eyenziwe yisisebenzi ngasinye, sazi isikhathi sokungena nokuphuma emsebenzini wabo, esivumela ukuthi basebenze amahora amangaki ekupheleni kwenyanga.
Ngaphezu kwalokho, isinikeza ukuhlaziywa okugcwele kokuthengisa, ngemali engenayo, izilinganiso, izinzuzo, wazi ukuthi iziphi izinto ezidumile, finyelela umlando ophelele wokuthengisa ngezinsuku namahora (okusivumela ukuthi sazi ukuthi yimaphi amahora aqine kakhulu ebhizinisi) ngaphezu kokuthekelisa lonke lolo lwazi kuspredishithi lapho singafaka khona amanye amafomula ukuthola eminye imininingwane uhlelo lokusebenza olungasinikezi yona.
Ngenxa ye-coronavirus, izikhungo eziningi ezisuse incwadi ebonakalayo, ezinikeza lolu lwazi ngekhodi ye-QR, kusuka lapho amakhasimende angafaka ama-oda awo ukuthumela ekhishini kusuka efonini yakho.
ICamarero 10 iyahlangana nama-oda abekwe kuwebhusayithi futhi ihlangana ne-main amapulatifomu okulethwa kokudla. Uhlelo lokusebenza luqopha ukufinyelela nokusetshenziswa okwenziwa oweta kwi-POS, okuvumela ukukhawulela ukufinyelela kwemisebenzi ethile, kukhombisa imephu ngokusatshalaliswa kanye nesimo samatafula ...
INumier POS kungenye indlela ethokozisayo okufanele siyicabangele lapho sithola isoftware yokuphatha izihambi engcono kakhulu yebhizinisi lethu. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, oweta bangakwazi sebenzisa i-smartphone uku-oda kanye / noma ukulungiswa phambi kwekhasimende, ama-oda ahlobene ngqo netafula.
Lolu hlelo lokusebenza lusivumela ukuthi sikwazi ukulawula ngaso sonke isikhathi ukusebenza kanye nenzuzo yebhizinisi lethu, sibonga abaphathi bezentengiso nezindleko, ukheshi noma imali engenayo yamakhadi, istock control control, izindleko zabasebenzi, izindleko zikagesi, irenti ...
UNumier naye uyasivumela hlanganisa ama-oda avela kuwebhusayithi yethu namapulatifomu okulethwa kokudla kanye / noma ama-oda wokulanda lapho kusungulwa khona. Kubuye kusivumele ukuthi sakhe ikhodi ye-QR yamakhasimende ukufinyelela impahla yethu nge-smartphone yawo futhi azi imininingwane ye-allergen kepha hhayi ukufaka ama-oda.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Yini isoftware eyinhloko yokuphathwa kokudlela?
I-PNY XLR8, i-SSD yamanani emidlalo yokuncintisana [Ukubuyekeza]